Home » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Enyemaka GTRCMC dị n'ụzọ maka iweghachite njem nlegharị anya na Haiti
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Haiti • Akụkọ Ahụike • Akụkọ gbasara Jamaica • News • ndị mmadụ • Safety • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akwụkwọ akụkọ USA • Akụkọ dị iche iche
Iweghachite njem maka Haiti
Haiti nọ na nsogbu mgbe e gbusịrị onye isi ala mpaghara, mgbe ọdachi ndị na -emere onwe ha na COVID, na ala ọma jijiji na -egbu egbu na ụnyaahụ ụnyaahụ na -egbu ma ọ dịkarịa ala 724.
Enwere ike ikpochapụ njem nlegharị anya na Haiti ruo oge ụfọdụ, mana ọ ka bụ ngwa maka mba Caribbean a ka ọ gbakee. Taa, onye agbata obi sitere na Jamaica, nwoke a ma ama na ọ bụ onye na -akwado nkwụsi ike njem njem ruru Haiti, Hon. Edmund Bartlett kwuru.
Onye minista na-ahụ maka njem nlegharị anya nke Jamaica, na ngalaba-guzobere Global Resilience Resilience na Crisis Management Center (GTRCMC), Hon Edmund Bartlett, na-ekwupụta nchegbu maka mmetụta ọjọọ nke ala ọma jijiji 7.2 na nso nso a mere na Haiti.
Na Satọdee Ọgọstụ 14, oke ala ọma jijiji ahụ ruru 7.2 mebiri ọtụtụ obodo, na -eli ndị mmadụ na mkpọmkpọ ụlọ ndị dara ada na ngalaba Haiti.
Dịkarịa ala, mmadụ 724 nwụrụ na ọtụtụ ndị ọzọ na -efu na ihe fọdụrụ na Haiti. US na mba ndị ọzọ zigara ndị otu ọchụchọ iji nyere Gọọmentị Haiti aka.
Ọ bụrụ na ala ọma jijiji 7.2 ezughị, oke mmiri ozuzo nwere ike igbu egbu na -achọ na mba Caribbean ugbu a.
"Enwere m ọmịiko n'agwaetiti Haiti gbara agbata obi ka ọ na -ada n'ihi mbibi ala ọma jijiji ahụ kpatara. Ihe omume ihu igwe a na -egosi anyị ọtụtụ, mba ahụ dị na Caribbean kwesịrị ịdị njikere maka ijikwa na ibelata mgbe ha mere, "Minista Jamaica Bartlett kwuru.
Bartlett hụrụ obodo ya bụ Jamaica n'anya na ọrụ ya dị ka minista na -ahụ maka njem nleta na mba ahụ. Agbanyeghị, ọ hụla njem nlegharị anya site na anya zuru ụwa ọnụ. Nke a ebutela Jamaica n'ọkwa njem nlegharị anya ebe niile n'ụwa.
Bartlett gara n'ihu ikwu, sị: “Ọ bụ ya mere GTRCMC emebere ya iji nyere mba dị iche iche aka na njikere na njikwa ụdị ọgbaghara dị iche iche ka ha nwee ike ọ bụghị naanị gbakee kamakwa gbakee ike.
"Dị ka akụkụ nke mbọ inye nkwado, GTRCMC ga -ejikọ aka na ndị isi mpaghara ka ha zukọọ iji kpaa maka mmetụta ala ọma jijiji ahụ wee nyochaa ihe ọ pụtara maka njem nlegharị anya Caribbean, na -enye mmetụta ọjọọ nke a na -enwe na ndụ, ebe obibi, na n'ikpeazụ njem nleta, "Minista Bartlett kwukwara.
Haiti chọrọ ihe karịrị otu ọchụchọ na nkwado ihu ọma. Nchekwa na nchekwa bụ nnukwu okwu. N'ihi ndị nnupụisi na-arụ ọrụ n'okporo ụzọ na-eduga n'isi obodo enweghị ike kesaa enyemaka dị oke mkpa. Gọọmentị Haiti rịọrọ United States ka o nyere aka n'okwu uwe ojii a, mana azịza ka dị.
Peter Tarlow, onye ama ama n’ụwa niile ọkachamara nchekwa njem nchekwa na nchekwa, na onye isi oche nke Network Njem Nleta Ụwa kwuru na mgbasa ozi eTN News taa: “Nchedo na nchekwa njem nlegharị anya bụ isi maka njem ọ bụla ịga nke ọma. Networklọ Ọrụ Njem Nleta ụwa na mgbasa ozi ngwa ngwa anyị dị njikere ịrụ ọrụ aka na Minista Bartlett na GTRCMC iji nyere Haiti aka mgbe ha dị njikere. ”
The Resilience na Crisis Center nke Njem Nleta Mba Nile n'okpuru nduzi nke Minista Njem Nleta Jamaica Bartlett karịrị mmeghachi omume Caribbean maka ọdachi ndị dị na mpaghara, mana ebumnuche zuru ụwa ọnụ na ọnụ ọgụgụ na -arịwanye elu nke ebe ndị njem.
Haiti, nke ala ọma jijiji ọzọ siri ike mere na 2010 nke gburu ihe karịrị mmadụ 220,000, na -akwadokwa mwakpo nke Tropical Storm Grace.
“Dịka anyị siri hazie mkpụmkpụ mkpụmkpụ ruo etiti oge maka mgbawa ugwu nke mere na St. Vincent na Grenadines, GTRCMC ga -ejikọ ndị mmekọ mpaghara anyị maka ụzọ aga n'ihu,” ka onye isi oche nke GTRCMC, Prọfesọ Lloyd Waller kwuru.
Airbus na-ewepụta A320 fuselage na-akwado ọrụ ...